TALEEX: Nin ku xadgudbay haween badan oo lagu dhigay taariikh lama ilaawaan ah | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA TALEEX: Nin ku xadgudbay haween badan oo lagu dhigay taariikh lama ilaawaan...
Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo ka mid ah halgamayaashii u dagaalamayay xornimada dalka Soomaaliya isla markaana ah laga dhaxlay taariikh fac weyn oo qaarkood lagu dhigo iskuulada dalka, ayaa waxaa halkaan idinkugu soo gudbineynaa qeyb ka mid ah taariikhdiisa cajiibka leh iyo warbixin ku saabsan halka uu ku aasan yahay.
Allaha u naxariistee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo geeriyooday sanadkii 1919-kii xilli uu ku sugnaa gurigiisa kuna yaala degmada Taleex kaddib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dowladda Ingiriiska oo xilligaasi gumeysaneysay dalka Soomaaliya dhinaciisa Waqooyi.
Shabakadda Dalsoor oo booqatay qalcadaha waaweyn iyo halkii uu ku aasnaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee degmada Taleex ayaa waxaa sidoo kale ku aasan xaaski Sayidka oo lagu magacaabi jiray Maryama.
Xaaska Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayuu u tiriyay tix uu ku amaanayo, wuxuuna yiri: “Maryama Muslim hooyadii bay ahayd meel ay joogtaba, Ilaahow noogu sahal maalik baa tahaye”.
Qabriga Sayidka iyo dhammaan qabuuraha halkaasi ku yaala ayaa haatan laga mamnuucay dadka, kaddib markii la arkay dad qodaya iyagoo leh dahab baa ku jira sida qabriyada dadka boqorada ah loogu aaso dahabka iyo waxyaabaha qaaliga ah, iyadoo aanay jirin cid halkaasi tegi karta kaddib markii halkaasi la geeyay ilaalo gaar ah.
Marka laga soo tago qabriga Sayidka waxaa kale oo halkaasi ku aadan Hooyadii iyo aabihii, macallim halkaasi ku lahaa dugsi Qur’aan iyo Faraskiisii, kuwaasi oo sidii loo dhisay u taagan ilaa iyo iminka.
Sayidka Maxamed Cabdulle Xasan oo isugu hoggaaminayay ciidamadii Daraawiishta ayaa ka mid ahaa halgamayaashii gumeysi la dirirka, isagoona dagaallo dhowr ah la galay gumeystayaashii soo maray dalka Soomaaliya, kuwaasi oo uu ka soo hooyay guulo la taaban karo, isla markaana dhinaciisa ay uga geeriyoodeen kumanaan ciidan iyo dad rayid ah isugu jira.
Taariikhdiisa waxaa ka mid ah in Sayidka wiil uu dhalay uu kula taliyay inuu dadka dilka ka daayo kaddibna wiilkii uu ka diiday, markaas ayuu Ilaahey ka baryay in adduunyada ku kala kaxeeyo oo labadooda qof uun ka tago, kaddibna isagoo uu ku geeriyooday mar aan ka fogeyn kulankii uu wiilkiisa la yeeshay.
Degmada Taleex waxaa weli ku yaala geedkii lagu xiray nin guursaday 9-naag oo uu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ku ciqaabay inuu silic u dhinto geedna lagu xiro isla markaana aan loo geynin raashin uu cuno, halkaasi oo gaajo darteed ugu geeriyooday.
“Xaqa yagii Soomaali kamaanaan helin, degmada Taleexna waa halkii uu ka bilowday halgankii dalka lagu xoreynayay” ayuu yiri qof goobjooge ah oo u waramayay shabakadda Dalsoor, wuxuuna ka dalbaday Dowladda Federaalka Soomaaliya inay dib u eegto wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira degmadaasi Taleex.
Waxaa Diyaariyay: Jabril Max’ud Nuur (Jabra)